२०७३ साउन १५ गतेको त्यो दिन नआएको भए राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र आराधना राणा सायद आज प्रेम दिवस धुमधामसँगै मनाइरहेका हुन्थे । धुमधाम यस अर्थमा कि यही बुधबारमात्रै ३० वर्षे प्रहरी सेवाबाट राजेन्द्रमानले अवकाश पाएका थिए । त्यसैले सायद आज फुर्सदको दिनलाई उनले थप रोमाञ्चक बनाउँथे होलान् ।तर, उनी कोमामा छन् । न बोल्न सक्छन् र न त कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नै ।
भ्यालेन्टाइन्स डेमा संगीतमा पनि प्रेम र रोमान्सकै गीत बढी सुनिने गर्छ । हुन त बढी चल्ने पनि माया–प्रेमकै गीत हुन्छन् । यस सन्दर्भमा सात जना गायक–गायिकाका सात रोमान्टिक गीत :
दरबारमार्गको अस्तव्यस्तता । सवारी साधनको आउजाउ । राइजिङ मलको सडकछेउ 'रोयल ड्‍याफोडिल फ्लावर सप'मा वरमाला उन्दै थिइन्, मीना तामाङ श्रेष्ठ । पसल अगाडि रंगीविरंगी फूलका गुच्छा सजाएर राखिएका थिए । त्यसबीच रातो गुलाब मुस्कुराइरहेझैं लाग्थ्यो ।
प्रेम दिवसको अवसरमा चितवनका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा चहल पहल बढ्दो छ । मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र पुर्वी चितवनको सौराहा र पश्चिम चितवनको पटिहानी घटगाईमा खाना महोत्सव (फुडफेस्टिवल) आयोजना भएका छन् । महोत्सव हेर्न आउनेहरुले परम्परागत स्थानीय परिकारको स्वाद लिन पाउने छन् । जिल्लाका आदिवासी थारु बोटे समुदायको भान्सामा पाक्ने परिकारहरु महोत्सवका स्टलहरुमा पनि राखिएका छन् ।
प्रेम कथालाई विषयवस्तु बनाइएको किताब पढ्ने समय पनि हो भ्यालेन्टाइन्स डे । यसबेला उपहारको रुपमा एक–अर्कालाई यस्तामाया साट्‍ने किसिमका किताब पनि दिन सकिन्छ । दुई लेखक चार–चार वटा रोमान्टिक पुस्तक सिफारिस गर्छन् :
१४ फेब्रुअरी । अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डे । जुन आज शुक्रबार परेको छ । प्रेम प्रस्तावदेखि डेटिङसम्मलाई धेरैले यही दिनको प्रतीक्षा गर्छन् । यस बेला शान्त वातावरणमा गफिँदै घुम्न सकिने सात प्रदेशका सात स्थान ?
प्रेम र रोमान्सकै कुरा गर्ने समय हो भ्यालेन्टाइन्स डे । यस बेला हलहरूमा पनि रोमान्टिक फिल्म नै लागेका छन् । यसै अवसरमा अभिनेत्री केकी अधिकारीका प्रिय सात रोमान्टिक फिल्म, किन र कसरी ?
डेटिङ एपमा ह्यापी इन्डिङ !
च्याटमा गलत पहिचान राखेर अरुसँग कुरा गर्ने र त्यसलाई पत्याउने संख्यामा कमी आएको होला तर पूरै हटिसकेको छैन् । सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन, यो क्रम डेटिङ एपहरुमा पनि उत्तिकै छन् । भ्यालेन्टाइन डे विशेष :